စိတ်ဖိစီးနေတယ်၊အိပ်ရေးပျက်တာလည်းများတယ်ဆို သွေးတိုးကြောင့်အသက်တိုနိုင်ခြေ သုံးဆပိုများပါတယ် - Hello Sayarwon
လူဆိုတာတော့ ဖိစီးစရာတွေနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး။တွေးစရာ၊ လုပ်စရာတွေများလွန်းလို့ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့ညတွေမှာလည်း ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ ဒီအနေအထားကနေ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းထွက်ဖို့တော့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ချက်ချင်းတော့မသေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးကြီးမားလို့ပါ။
အလုပ်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးနေရတဲ့အပြင် အိပ်ရေးပါပျက်ထားသူဟာသွေးတိုးမရှိရင်သွေးတိုးဖြစ်လာ၊ ရှိပြီးသားဆိုလည်း နှလုံးသွေးကြောရောဂါနဲ့ ဆက်နွှယ်သေဆုံးရနိုင်ခြေ သုံးဆပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါက လတ်တလောထွက်ရှိထားတဲ့ သုတေသနရလဒ်ပါ။
သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့အိပ်မပျော်ခြင်းဘယ်လိုဆက်နွယ်နေလဲဆိုတာ သုတေသနကလေ့လာတဲ့အခါ ရလဒ်ကတော်တော်ဆိုးတာတွေ့ရပါတယ်။
သုတေသနမှာ အသက် ၂၅ နှစ်ကနေ ၆၅ နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၀၀၀ နီးပါးရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်ခဲ့ရာမှာသွေးတိုးရှိသူတွေဟာလေ့လာမှုစတင်ချိန်မှာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ သို့မဟုတ် ဆီးချိုရောဂါမရှိခဲ့ကြပါဘူး။
အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာရှိနေသူပဲဖြစ်ဖြစ် နှလုံးသွေးကြောရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီနှစ်ချက်လုံးရှိနေတဲ့သူမှာတော့ အန္တရာယ်ပိုများနေပါပြီ။ ဒီသုတေသနကိုEuropean Journal of Preventive Cardiologyဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတာပါ။
“သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ပါ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် စိတ်ဖိစီးပြီး အိပ်မပျော်တာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဖိစီးနေရတဲ့အလုပ်နဲ့ အိပ်ရေးမမှန်တာ နှစ်ချီနေပြီဆို ခွန်အားအရင်းအမြစ်တွေမလုံလောက်တော့ဘဲ အသက်တိုနိုင်တာပေါ့”လို့Technical University of Munich ကProf. Karl-Heinz Ladwig ကပြောပါတယ်။
သွေးဖိအားမြင့်တက်လာတဲ့အခါ နှလုံးက ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးပို့လွှတ်ရတာ ပိုပင်ပန်းရတဲ့အတွက် နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်ပိုများတာသေချာပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်ပိုလုပ်ရတဲ့အခါ နှလုံးကြွက်သားတွေပိုထူလာပြီးသွေးကြောနံရံတွေမာလာ၊ ပျက်စီးလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဆီအောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိမှုနည်းသွားပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နှလုံးပျက်စီးလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီသုတေသနမှာ စိတ်ဖိစီးတဲ့အလုပ်ဆိုတာ တစ်နေ့ဘယ်လောက်ပြီးရမယ်၊ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တပါးသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲ ကိုယ်တိုင်အတွက်ဇောတွေများစေတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
တချို့က အိပ်မပျော်တာ၊ အိပ်မရတာနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေရပေမယ့် အိပ်စက်မှုပြဿနာရှိတဲ့သူ အများစုဟာ အိပ်ပျော်လျက်နဲ့ အိပ်ရေးမဝတာ၊ကောင်းကောင်းမအိပ်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်လို့ သုတေသီတွေကပြောပါတယ်။
“အိပ်ရေးဝနေအောင် ကြိုးစားရတာ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ အဖြစ်များဆုံးပြဿနာပါပဲ။ ဥပမာ တချို့က မနက်ဆို ၄ နာရီထတယ်၊ အိမ်သာသွားတယ်၊ အိပ်ရာထဲပြန်လှဲပြီး အလုပ်ကိစ္စတွေအကြောင်း ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ မပျော်တပျော်ပြန်အိပ်ကြတယ်” လို့Prof. Ladwig ကပြောပါတယ်။
သွေးတိုးရောဂါဟာ သူ့တစ်မျိုးတည်းနဲ့တင် နှလုံးရောဂါအတွက် အန္တရာယ်များနေပြီဖြစ်တာကို အိပ်မပျော်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာတွေထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်ပြဿနာပိုကြီးသွားနိုင်တာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ဖိစီးမှုတွေကိုပြေလျော့စေမယ့်နည်းလမ်းတွေရှာကြဖို့၊ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ သုတေသီတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုသွေးတိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်၊သွေးတိုးရှိပြီးသားဆို ပိုဆိုးနိုင်တယ်၊ အန္တရာယ်များပါတယ်နော်။